Fanaanada reer Jabuuti oo weerartay wadamada Salafiyiinta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Fanaanada reer Jabuuti oo weerartay wadamada Salafiyiinta
Fanaanada reer Jabuuti marna reer Awdala ee Mardiya Siciid Jaamac ayaa weerartay wadamada Salafiyiinta oo diidey in Af_Somali lagu heeso laakiin ogol Afcarabi. Fanaanada oo iyadu baryahan dambe inta badan ku jirin fanka ayaa sheegtay in dalkii ay qabsadeen Salafiyiinta Sucuudiga ee surwaalka gaagaaban.
Waxa fanaanada ku kalifay hadalka mar fanaanka Cawaale Aadan oo si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Awdal ay maykarafoon la daba qaateen.”Waa iniga iyo anaga ayay yiri Mardiya oo dadku aad u jecel yahay matilaadeeda.
Waqtigii burburka kadib dalku wuxuu u gacan galay wadaadada Salafiyiinta ee faafiya caqiiqada Wahaabiyada ee Sucuudiga oo xataa dhulka ayna Ka talin ee Woqooyiga dumarka u diidey in dhar madow mooyee midkale xirtaan afkana duubtaan sida Sucuudiga.
Ma oga in Sucuudigii Ka tagey doontaa qaldan ee wadamada ku faafiyeen. Waxay Boorama ku leeyihiin xarumo waaweyn, markastana wey kordhiyaan xarumaha haweenka.
Waxa laga baqayaa hadda inay gaaleeyaan ama dhib kale u gaystaan maadaama ay can ku yihiin gaalaynta Muslimiinta.